Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (sy IV): Uber | Vaovao IPhone
Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (sy IV): Uber
Tombanana maherin'ny 60.000 tapitrisa euro, tsy misy olona manana fisalasalana na kely aza ny amin'ny hoe iza no tompon'andraikitra ny tontolon'ny fivezivezena 2.0. Uber dia dingana ambonin'ireo sisa tavela noho ny politika fanitarana mahery vaika, ny tsy fivadihan'ny mpampiasa azy ary ny traikefan'ny mpampiasa natolony hatramin'ny nanombohany. Tonga ny fotoana hamakafaka ny mpanjaka.
1 Eto i Uber
2 Uber any Espana
3 Fitsapana Uber
Eto i Uber
Taorian'ny fanatsarana vao haingana ny fampiharana dia izao i Uber mora kokoa sy haingana kokoa hampiasaina noho ny hatramin'izay. Ny fangatahana dia dia segondra vitsy, satria nandany fotoana be dia be izy ireo tamin'ny fanaovana haingana sy lojika araka izay azo atao ny fizotrany mba tsy handany fotoana betsaka kokoa noho izay tsy azo ihodivirana.
Mazava ho azy fa voatazona hatrany ny tombony rehetra izay nampiavaka an'i Uber hatrany, toy ny fizarazarana ho karazana profil telo (manokana, fianakaviana ary orinasa), ny fahafaha-mizara tahan'ny amin'ireo namantsika amin'ny dia mitovy na karazana serivisy ampidiriny . safidy isan-karazany toy ny fiara elektrika, fiara lehibe, sedan lafo vidy, serivisy fanaterana sakafo na koa ny mety fandefasana sy fandraisana parcel.
Ho fanampin'izany rehetra izany dia tsy azo odian-tsy hita fa satria mpitarika tsy azo iadian-kevitra ity segondra ity dia io ihany koa no orinasa manana fiara betsaka indrindra ka noho izany ilay hahatonga antsika hiandry kely hanao dia amin'ny ankamaroan'ny tranga. Mazava ho azy, tandremo ny malaza vidiny miakatra raha hampiasa ny serivisy amin'ny fotoana tampony na amin'ny hetsika isika.
Uber any Espana
Ny toe-javatra misy an'i Uber any Espana ankehitriny dia azo lazaina ho tsara antonony sy be fanantenana. Taorinan'ny fanombohana nampanantenaina, avy amin'ny tontolon'ny Taxi dia napetaka tamin'ny hena rehetra ny hena hanandrana manakana an'i Uber amin'ny alàlan'ny fantsona ara-dalàna rehetra, amin'ny farany fampijanonana ny orinasa amin'ny asany.
Aorian'ny fotoana tsy nahajanona azy, Niverina tany Madrid i Uber herintaona mahery kely lasa izay niaraka tamin'ny maodely nampiasain'i Cabify, izany hoe ireo mpamily manana fahazoan-dàlana VTC, izay ara-dalàna tanteraka. Indraindray fiara be dia be no tsy hita, saingy ny lisansa dia mametra ny fahafaha-manao betsaka ary mazava ho azy fa tsy maintsy homarihina. Na izany aza, amin'ny ankapobeny, ny fiandrasana fiara dia fohy sy mitombina.
Ny drafitry ny orinasa tarihin'i Travis Kalanick dia mandalo ny fipetrahana any amin'ny tanàna maro any Espana, ny kandidà roa lehibe manaraka dia i Valencia sy Barcelona.
Raha mbola tsy nampiasa Uber ianao ary misy ao amin'ny tanànanao ankehitriny, azonao atao ny misintona ny fampiharana ary mahazo fitsangatsanganana fanomezana (Miovaova arakaraka ny vanim-potoana io). Azonao atao a maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana amin'ny bola raha irinao amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny taxi amin'ny ho avy dia ao anatin'ny ankehitriny (sy IV): Uber
Uber dia hoy izy:
Manantena aho fa ny Uber dia azo ampiasaina amin'ny fomba ankapobeny manerana an'i Espana, namakivaky an'i Amerika atsimo aho ary fifaliana ny fampiasana azy any ary manangona vola be amin'ny fisorohana ireo taxi na fitaterana manokana lafo vidy kokoa aza. Tsy isalasalana fa mieritreritra aho fa tsara kokoa noho Cabify fa izay voalaza, avelao handeha araka ny takiana manerana an'i Espana.
Valiny tamin'i Uber
CCWallCustomizer dia mamela antsika hanova ny mombamomba ny Control Center